कलेज जान्छु भनेर निस्केकी युवती आफ्नो बोइफ्रेन्ड संग यस्तो हेर्नै नसकिने अवस्था मा.. (हेर्नुहोस भिडियो)
October 3, 2020 News36mediaLeaveaComment on कलेज जान्छु भनेर निस्केकी युवती आफ्नो बोइफ्रेन्ड संग यस्तो हेर्नै नसकिने अवस्था मा.. (हेर्नुहोस भिडियो)
यो घटना हाम्रो छेमेकी भारत मा भएको हो युवती सधै कलेज जान्छु भनेर घर बाट निस्के पछि आफ्नो बोइफ्रेन्डको घर मा गएर यस्तो छाडा गरे बाकी भिडियो हेर्नुहोस । यो पनि काठमाडौं। एक पुरुषले आफ्नी श्रीमतीको अ’वैध सम्बन्ध आफ्नै बुवासंग भएको थाहा पाएपछि अनौठो गरेका छन् । उनले पहिला बुवाको श्राद्ध गरेका छन् त्यसपछि ज्या’न […]
October 3, 2020 News36mediaLeaveaComment on उनी रोइकराइ गरिरहिन्, स्कुटरसँगै रहेको ब्याग र छोराको कपडा पनि निकाल्न नदिई जलाइदिए
शारदा भट्टराई शुक्रबार रातभरि सुत्न सकिनन्। एक वर्षदेखि आफू कार्यालय जाने-फर्किने स्कुटर आँखै अगाडि जलाइएको घटनाले उनको मन पनि दन्किइरहेको छ। विगत आठ वर्षदेखि सरकारी सेवामा रहेकी शारदा गत वर्ष साउनदेखि तिलोत्तमा नगरपालिकाको शिक्षा अधिकृतको रुपमा कार्यरत छिन्। शुक्रबार दिनभरि नै नगरपालिकाको काममा व्यस्त बनेकी शारदा २-३ बजेतिर कार्यालयकै कामका लागि बुटवल गएकी थिइन्। तिलोत्तमा […]
October 3, 2020 News36mediaLeaveaComment on १३ श्रीमती बिहे गरेका यि पुरुषले एकसाथ सबै श्रीमतीलाई गर्भवती बनाएपछि
एजेन्सी । एक पुरषले १३ जनालाई पत्नीलाई एकैसाथ गर्भवती बनाएका छन् । उनीहरु नाइजेरीयाका हुन् । १३ श्रीमतीलाई सँगै विबाह गरेका ति पुरुषले एकैसाथ गर्भवती बनाएको खबर अहिले सामाजिक संजाल र अनलाइनमा भाइरल भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा १३ जना गर्भवती पत्नीसँगै उभिएर ती पुरुषले खिचेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि अहिले उक्त तस्विर ब्यापक मात्रामा शेयर […]
October 3, 2020 News36mediaLeaveaComment on देवर भाउजू काण्ड: आफ्नै भाउजुले १८ बर्षका देवरलाई लुकीलुकी काेठामै बाेलाएर….
भाउजु आमा समान हुन्’ भन्ने भनाईलाई कैलालीका एक युवाले मिथ्या सावित गरेका छन्। आमालाई जस्तो सम्मान गर्नुपर्ने आफ्नै भाउजुलाई गर्भवती बनाएर ती युवाले यस्तो हर्कत देखाएका हुन्। प्राप्त जानकारी अनुशार कैलालीको लम्कीमा एक १८ वर्षीय देवरले भाउजुलाई गर्भवती बनाएका हुन्। दाजु विदेश गएको मौका पारी भाउजुसँग सल्किएका ती देबरले एक छोरीकी आमालाई गर्भवती बनाएका हुन्। […]
October 3, 2020 News36mediaLeaveaComment on कोरोनाकै कारण मृत्यु भएकि २५ बर्षिया युवतीकाे यस्तो थियो उपचार!
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको १६ दिनपछि २५ वर्षीया युवतीको निधन भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ बाँकेकी २५ वर्षीया दीपा कुँवरको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा आज निधन भएको हो । दी’र्घरोग वा अन्य स्वास्थ्य स’मस्या नभएको र उनको निधन को कारण कोभिड १९ रहेको उपचारमा सं’लग्न चिकित्सकले बताएका छन् […]
October 3, 2020 News36mediaLeaveaComment on किशोरको बयान : दाजु विदेशमा, घरमा सबै सुतेपछि भाउजु आउनुहुन्थ्यो, बच्चा होला भन्ने थाहा थिएन !
October 3, 2020 News36mediaLeaveaComment on इट,हरीको जं,ङ्गलमा दुई जनाको च,र्तिकला
इटहरी । धरानबाट सँगै खाएर म’दिरामा लठ्ठ भएर इटहरी तिर हुईकिएका मोरङका दुई जनाले साझमा चर्तिकला देखाएका छन । मदिराले लठ्ठ सुनसरीको भेण्टाबारी घर बताउँने युवा बिच वा,दवि’वाद हुदा केहि बेर सडकनै जाम भएको थियो । दुबै जनाले मा,दक पदा,र्थ खाएको र उनीहरु आफै मोटरसाईकल रोकेर झ’गडा गरेका थिए । सेउती नजिकै उनीहरुले झ’गडा गर्दा […]